မကဲနဲ့ မောင်ရယ် – Grab Love Story
တစ်ထပ်တိုက်လေးက အကြမ်းထည်ပြီးတော့မည်။ ကန်ထရိုက်တာက ဦးအေးမောင်ဖြစ်သည်။ ဦးအေးမောင်မှာ အရင်ကလက်သမားဆရာ၊ ပန်းရံဆရာကြီးဖြစ်သည်။
သူကအများတွေလို လက်သမားသီးသန့်၊ ပန်းရံသီးသန့် ကျွမ်းကျင်တာမျိုးမဟုတ်ပေ။
လက်သမားလုပ်ငန်းကော၊ ပန်းရံလုပ်ငန်းပါ ကျွမ်းကျင်တာဖြစ်သည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု၊ အလုပ်တွင်စေ့စပ်သေချာမှု၊ ပိုင်ရှင်အပေါ် စေတနာတွေထားမှုတွေကြောင့် လူတွေက သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်း ယုံကြည်စိတ်ချလာပြီး အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကို `ဝ´ ကွက်အပ်သည်အထိ ဖြစ်လာကာ ဦးအေးမောင် တစ်ယောက် ကန်ထရိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။
“ မောင်ကျော်ရေ………မောင်ကျော် ”
“ လာပြီဆရာ…… ”
ဦးအေးမောင်၏ ခေါ်သံကြောင့် ပေကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ် အလုပ်ရှုပ်နေသော အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် လောက်ရှိသော လူငယ်တစ်ဦးက ဦးအေးမောင်၏ အနားသို့ရောက်လာသည်။
“ ငါအမိုးပြားဝယ်ဖို့သွားဦးမယ်………….လှသန်းကို ခေါ်သွားမယ်….မင်းဒီမှာနေလိုက်ဦး…”
“ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ… ”
မောင်ကျော်မှာ လက်သမားလည်းမဟုတ်၊ ပန်းရံလည်းမဟုတ်၊ ကန်ထရိုက်တာ ဦးအေးမောင်၏ လက်ထောက်တပည့် တစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။
စက်မှုလက်မှု အတတ်ကျောင်းဆင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဦးအေးမောင်အတွက် စာရင်းဇယားများ တိုင်းတာတွက်ချက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေရသူဖြစ်သည်။
“ လှသန်း…ငါနဲ့လိုက်ခဲ့အုန်းဟေ့.. ”
“ ဟုတ်ကဲ့ဆရာလာပြီ.. ”
ခေါင်မိုးတွင် မျှားတန်းတွေရိုက်နေရာမှ အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ် လူငယ်တစ်ယောက် တဖြေးဖြေးချင်းတွ ယ်ကပ်ရွေ့ဆင်းလာသည်။
ပြီးတော့ ရေဘုံဘိုင်တွင် ခြေလက်ဆေးပြီး ဦးအေးမောင်အနားသို့ ရောက်လာသည်။
“ မောင်ကျော်…..မျှားတန်းတွေကိုပြီးအောင်ရိုက်ခိုင်းထား…….ငါတို့သွားပြီ ”
“ ဟုတ်ကဲ့… ”
ထိုသို့ထွက်သွားပြီး (၁၅)မိနစ်မျှကြာသောအခါ တွင် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထမင်းချိုင့်ကလေးနှင့်ရောက်လာသည်။ ဆောက်လက်စတိုက်လေးနားရောက်တော့ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်သည်။
“ ဦးလေးချစ်….အစ်ကိုရော… ”
“ နင့်အစ်ကို ကန်ထရိုက်နဲ့လိုက်သွားတယ်…. ဘာလဲထမင်းချိုင့်လား…….. ဟိုအုတ်ခုံပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့ ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး…. ”
ဦးချစ်မှာ လက်သမားများထဲတွင် အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး လှသန်းတို့နှင့် အမြဲတွဲနေသော တစ်ဖွဲ့သားထဲဖြစ် သည်။
“ ညိုညို….နင်ဆိုင်မထွက်ဖူးလားဟ…… ”
“ ဆိုင်သိမ်းပြီးပြီ ဦးလေး …….. ကျမ ထမင်းကြော်ကမနက်ခင်းဘဲ ရောင်းတာလေ….. ”
“ လှသန်းလာရင် ဘာပြောလိုက်ရဦးမလဲ…. ”
“ ကျွန်မ ညနေ အဖေတို့အီမ်သွားဦးမယ် ပြောလိုက်ပါ…. ”
“ အေးအေး…… နင့်အဖေရော မူးတုန်းပဲလား…….. ”
“ ဦးလေးချစ်တို့ အပေါင်းအသင်းတွေပဲ မသိဘူးလား….. ”
ကောင်မလေးက ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ပြန်ပြောသည်။
“ နင်လဲ ပင်ပန်းပါတယ်ဟာ….. နင့်အစ်ကိုလှသန်းကိုသာ မိန်းမပေးစားလိုက်ပါတော့…… ”
“ ကျွန်မက ဦးလေးသမီး အဝင်းနဲ့ သဘောတူတာ ”
“ ကောင်မလေးနော်……. ”
“ ဝါး….. ဟား….. ဟား……. ဦးချစ်ထိသွားပြီကွ…. ”
“ ကျမ သွားတော့မယ် ဦးလေးချစ်….. ဦးလေးသားမက်ကိုလည်း ထမင်ချိုင့်ပေးလိုက်ဦး….. ”
“ ဟာ……ဒီကောင်မလေးတော့နော် ”
ကျောခိုင်းထွက်သွားပေမယ့် သူမ၏နောက်ကျောကို ကြည့်နေသူကတော့ မောင်ကျော်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကို ဦးချစ်က အပေါ်စီးမှတွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်သည်။
“ ဟေ့ကောင် မောင်ကျော်……တော်ပြီလေကွာ…. ”
“ ဟာ.. ဦးလေးကလဲ.. ”
“ မင်းကလဲကွာ… ကန်ထရိုက်သမက်ဘဲဖြစ်တော့မယ့်ဟာကွာ… ”
ဦးချစ်ကို ပြန်ပက်ရန်ပြင်လိုက်သော မောင်ကျော်နှုတ်ဆိတ်í လှည့်ထွက်သွားတော့သည်း ကန်ထရိုက် ဦးအေးမောင်ထံတွင် ချိုချိုအေး ဆိုသော အသက်(၂၈)နှစ်လောက်ရှိသည့် သမီးတစ်ယောက်ရှိသည်။
မောင်ကျော်က ဦးအေးမောင်အိမ်သို့ ဝင်ထွက်ရင်းဖြင့် ချိုချိုအေးနှင့် ကြိုက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
လှသန်းနှင့်ညိုညိုတို့၏ ဖခင်က အရက်သမား ဇိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လှသန်းနှင့် ညိုညိုတို့၏ မိခင်နှင့်ကွဲခဲ့ပြီး သူတို့မောင်နှမက မိခင်နှင့်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်သည်။
ဖခင်ကတော့ သူ့နှမတွေအိမ်ကို ဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်သည်။ ဖခင်နှင့်မိခင်တို့ ကွဲတာကကြာခဲ့ပြီ။ သူတို့မောင်နှမ၏ မိခင်ပင်လျှင် မနှစ်ကဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်သည်။
“ ဒေါ်လေး….. အဖေနေကောင်းလား ”
“ အစ်ကို… ညိုညိုလာတယ်.. ”
“ အေး… ဒီကိုလွှတ်လိုက် ”
“ ဟင်…. အဖေ နေမကောင်းဘူး ”
“ အေး..သမီး… ချောင်းဆိုးသွေးပါပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီ… ”
“ ဒေါ်လေး…အဖေ့ကိုဆေးခန်းမပြဘူးလား ”
စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် ညိုညိုက ဖခင်၏ညီမ အဒေါ်ဖြစ်သူထံ လှည့်ရွေ့မေးလိုက်သည်။
“ ပြတော့ပြတာပေါ့အေ….. ဆရာဝန်က တို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး အပြင်မှာဆေးဝယ်စားဖို့ ဆေးစာရေးပေး လိုက်တယ်…”
“ ဟင်……ဆေးရောထိုးမပေးဘူးလား…. ”
“ ဆေးတစ်လုံးထိုးပေးလိုက်တယ်…ဒါကြောင့်ညည်းအဖေ ဒီလောက်ခံသာနေတာပေါ့…… ”
“ ဆေးကဘယ်လောက်တဲ့လဲ….. ”
“ နေပါစေ သမီးရယ်……အဖေလည်း နဲနဲသက်သာပါတယ်…… ”
“ ငါသွားမေးတာ ရှစ်ထောင်တဲ့…… ”
ညိုညိုစိတ်ထဲတွင် တွက်လိုက်သည်။ သူမ၏ အစ်ကိုအပ်ထားတာနှင့် သူမစုထားတဲ့ ငွေကငါးထောင်နီးနီးရှိသည်။ မနက်ထမင်းကြော်ရင်းဖို့ ငွေ(၂၀၀၀) ကျော်က လက်ထဲတွင်ပါလာသည်။
ညနေဈေးလေးတွင် ဝင်ဝယ်ပြီး ညဦးပိုင်းတွင် ချက်ပြုတ်နေကြဖြစ်သည်။ အခုလဲ ညိုညိုအဖေ့ထံမှအပြန် ဈေးသို့ ဝင်မည်ဟု စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်သည်။ အားလုံးပေါင်းလိုက်လျှင် (၈၀၀၀) လောက်တော့ရှိသည်။
မနက်အတွက် အရင်းကတော့ ပြုတ်သွားမည်။ မနေ့ကမှ သူတို့မောင်နှမ အဝတ်အစားတွေ ဝယ်လိုက်သဖြင့် ဒီလောက်ကျပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်းပြုတ်ချင် ပြုတ်စေတော့။ ညကျ အစ်ကိုလှသန်းပြန်လာတော့မှ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ညိုညို အဒေါ်ဖြစ်သူထံမှ ဆေးစာယူပြန်လာပြီး အိမ်မှငွေကိုယူကာ ဆေးသွားဝယ်ပြီး ဖခင်ထံသို့ပြန်ပို့ပေး လိုက်သည်။
ညမိုးချုပ်တော့ အစ်ကိုလှသန်း အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့ သူ့ထံမှာရှိ သော ငွေတစ်ထောင့်ငါးရာ ထုတ်ပေးသည်။ အဲဒါနဲ့ဘဲ တစ်ရက်လောက်ရင်းထားလိုက်ဖို့ ပြောသည်။
ဒါပေမယ့် ဈေးဝယ်မမှီတော့။ မနက်ဖန် တစ်ရက်တော့ ညိုညိုဆိုင်မထွက်ဖြစ်၊ နားရဦးမည်။ မနက်မိုးလင်းတော့ လှသန်းကလည်း အလုပ်နားရက်ဖြစ်သည်။
ကန်ထရိုက်ဦးအေးမောင်က တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်နားရက်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့် လှသန်းကမနား။
ဦးချစ်တို့နှင့်တွဲ၍ အပြင်က ကြားပေါက်လက်သမား အလုပ်လေးတွေကို လိုက်လုပ်သည်။ ဒီနေ့လည်း ရွှေပြည်သာဖက်တွင် ဈေးဆိုင်ဆောက်ရန် လက်ခံထားသဖြင့် လှသန်းမှာ ဦးချစ်တို့နှင့်အတူ ဝေလီဝေလင်းကပင် ထွက်သွားပြီဖြစ်သည်။
မနက်(၁၁)နာရီလောက်တွင် ညိုညို၏အဒေါ်ဖြစ်သူ ရောက်လာသည်။ ဒီနေ့တစ်မနက်လုံး ညိုညို၏ဖခင်မှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို သွေးတွေအန်နေသည့်အတွက် ဆေးရုံတက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်းလာပြောသည်။
အနည်းဆုံး ငွေနှစ်သောင်း သုံးသောင်းလောက်တော့လိုမည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူအား အဖေ့ကိုဆေးရုံတင်မှာသာတင်ပါ။ ငွေရှာပြီး လိုက်လာခဲ့မည်ဟု ညိုညိုပြောလိုက်သည်။
ပြောမဲ့သာပြောလိုက်ရသည်။ ညိုညို ငွေကိုဘယ်သွားရှာရမည်ကို စဉ်းစား၍ မရသေးချေ။ သည်နေ့ ချိုချိုအေးနှင့်တွေ့ရန် ချိန်းထားသဖြင့် မောင်ကျော်မှာ ကန်ထရိုက်ဦးအေးမောင်၏ အိမ်သို့လာခဲ့သည်။
ဒီနေ့အလုပ်နားရက်ဖြစ်၍ သူမအဖေနှင့်အမေတို့ အပြင်သွားရန်ရှိပြီး အိမ်တွင်သူမတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့မည်ဟု မောင်ကျော်အား ချိုချိုအေးက ပြောထားသည်။ တကယ်တော့ မောင်ကျော်ရောက်လာချိန်တွင် ချိုချိုအေးမှာ အိမ်တွင်ရှိမနေတော့ပါ။
သူမ၏အဖွားက မှာသဖြင့် သူမ၏မိခင်နှင့်အတူ အဖွားထံသွားပြီဖြစ်သည်။ ဒါကို မောင်ကျော်ကမသိ။ မောင်ကျော် စိတ်ထဲတွင်တော့ ချိုချိုအေးထံမှ သူအမြဲလိုလားတောင့်တနေသောအရာကို ရအောင်ယူတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ရ်ျလာခဲ့ခြငိးဖြစ်သည်။
အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ ချိုချိုအေးအခန်းထဲတွင်ရှိမည်၊ အပိုင်ဘဲဟဟူသော အတွေးဖြင့် အိမ်ရှေ့ခန်းမှနေ၍ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ဝင်ရန်ပြင်လိုက်သည်။
“ အား……အား….နာတယ်…..နာတယ်…အိုး…….အား……အား……. ”
ကြားလိုက်ရသော အသံကြောင့် မောင်ကျော်ခြေလှမ်းများရပ်သွားသည်။ အင်္ကျီချွတ်နှင့်ကျောပေးထားသော ဦးအေးမောင်ကို နောက်ဖက်ကတွေ့လိုက်ရသည်။ အသံကြားလိုက်ရသော အခန်းတံခါးဝသို့ မောင်ကျော်ပြေးကပ် ၍ကြည့်လိုက်သည်။
“ အား…….အား…….အရမ်းနာတာဘဲ……ကျွတ်…..ကျွတ်.. ”
ဖြူဖွေးနုနယ်သော လက်လေးတစ်ဖက်က ဦးအေးမောင်၏ ကျောပြင်ကြီးက်ို ဖက်၍ထားသည်။
“ အိုး……အိုး…..အလာလား….အဲ့ဒါအရမှးထိတာဘဲ…….အ….အ.. ”
အခန်းထဲတွင် ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်ထားသောကြောင့် အလင်းရောင်က အားနည်းနေသည့်အပြင် အခန်း တံခါးဝတွင်လည်း ကန့်လန့်ကာလေးက ရှိနေသေးသည်။
မောင်ကျော် ကန့်လန့်ကာလေးကို အသာလေးဖယ်၍ အခန်းထဲသို့ကြည့်လိုက်သည်။
“ဗြွတ်…… ပြွတ်……ပလွတ်….စွပ်….စွပ် ”
ကြီးမားမဲနက်သော လီးကြီးကဖြူဖွေးနီရဲလျှက် ပြဲအာနေသော စောက်ပတ်လေးထဲ ပြည့်ပြည့်ကြီးဝင်နေသည်။ စောက်ပတ်ဘေးသားလေးများက နီရဲကာ ပြည့်တင်းတင်း ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည်။
အခန်းတံခါးဘက်သို့ ကျောပေးထားသဖြင့် ထောင်ထားသော ဒူးလေးနှစ်ချောင်း ဖြဲကားလိုက်တိုင်း ဖိဝင်လိုးသွင်းနေသောလီးကြီး အဝင်အထွက်ကို မောင်ကျော်ရှင်းလင်းစွာ မြင်နေရသည်။
“ တော်…..တော်ပြီ ဦးလေးရယ်….နာတယ်……. ”
“ ခဏလေးပါ ညိုညိုရယ်….. ဦးလေးပြီးကာနီးပါပြီ……. ”
“ ပြွတ်…..ပြွတ်…..စွပ်……စွပ်…..အ….အ….အီး…..အီး… ”
ညိူညိုတဲ့…..ဒါ….ဒါ….လှသန်းညီမလေး…..ဟာ…..ရက်စက်လိုက်တာ……နှမြောဖို့ကောင်းလိုက်တာ….. ညိုညိုက ဘာလို့ရောက်လာတာလဲ……အရင်ထဲကဖြစ်နေပုံတော့ မဟုတ်ဘူး……..။
မောင်ကျော် ရင်ထဲတွင် ဗလောင်ဆူသွားသည်။ မနေ့ကပင် မောင်ကျော် ညိုညိုကိုကြည့်ပြီး ချစ်စိတ်တွေ ဝင်လာမိခဲ့သေးသည်။ အခုတော့ ကန်ထရိုက်ဦးအေးမောင်၏ ရင့်ထော်မဲနက် ညစ်နေသော လီးကြီးက ညိုညို၏ နုဖတ်ဖြူဖွေးသော စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ပက်ပက်စက်စက်ဖြဲနေပြီ။
“ တော်ပြီ….. တော်ပြီ…. ပိုက်ဆံမချေးချင်လဲနေ….. ပိုက်ဆံလိုက်ယူဆိုပြီး အခန်းထဲခေါ်လာပြီးတော့ အတင်းလုပ်တယ်…. အင်း….. အီး…. အီ…… ”
ညိုညိုစကားကြောင့် မောင်ကျော်ဇာတ်ရည်တစ်ဝက်လောက် လည်သွားပြီဖြစ်သည်။
“ ဗြွတ်….. ပြွတ်….စွပ်….စွပ်….. ပြွတ်.. ”
“ အား….အား….အမလေး…..ကျမ…….မခံနိုင်တော့ဘူး……လွှတ်ပါတော့….အားး……အားး……. ”
ညိုညို ငိုလဲငို အတင်းလဲရုန်းနေသည်။
“ ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ……ညိုညိုရာ… ”
“ ပြွတ်… ဗြစ်… စွပ်… စွပ်… အား…. အမလေး… အား…. အား…. လွှတ်ပါဆို… ဘုန်း…. ဘုန်း…. ”
ညိုညို ရုန်းလဲရုန်း ဒေါသတကြီးဖြင့် မွေ့ယာကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထုသည်။
ညိုညို အပြင်းအထန် ရုန်းကန်နေသောကြောင့် ဦးအေးမောင် အရသာပျက်သွားသည်။
“ ဟာ…..ဒီကောင်မလေး…..နင် စိန်ကျော်နဲ့ခံတုန်းက ဒီလိုဘဲလား…… ”
“ ဘာ….ဘာ…. အဲ့ဒါ ကျွန်မရည်းစားရှင့်… ရှင့်လိုလဲ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း အတင်းလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး….. ”
ညိုညို ဒေါသစိတ်ဖြင့် လိမ်ညာဖုန်းကွယ်ရမည့် ကိစ္စကိုဖွင့်ဟ မြည်တွန်လိုက်သည်။
ဟာ စိန်ကျော်နဲ့ခံဘူး တယ်တဲ့ သူ့ရည်းစားတဲ့၊ ဟွန်း ငါနဲ့တော့ကွာပါ့ ငါ့ရည်းစား မမချိုက်ို အခုထိလုပ်လို့ မရသေးဘူး ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် ရအောင်ချမယ်ဟု မောင်ကျော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်။
ဦးအေးမောင်က ညိုညို၏ နို့ကြီးတွေက်ို စုံကိုပြီးတအား ဆောင့်နေသည်။ ညိုညို မခံမရပ်နိုင် ရုန်းကန်လေ ဆောင့်ချလေပင်ဖြစ်သည်။
“ အီး…..ဟီး….ဟီး……အမလေး……နာလိုက်တာ……အမလေး…..လေး…. ”
“ မငိုပါနဲ့ ညိုညိုရယ်….ကောင်းလာမှာပါ…… ”
“ ပြွတ်… ပြွတ်…စွပ်…စွပ်…ပလွတ်….ဗြွတ်….ပြွတ်…´´
စောစောက ဦးအေးမောင်ကို ဖက်တွယ်ထားသော ညိုညို၏လက်ကလေးများက ဦးအေးမောင်ရင်ဘတ်ကို စုံကန်တွန်းထားသည်။
ညိုညို၏ စကားအဆုံးမှာပင် ဦးအေးမောင်က ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် ညိုညို၏နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဖမ်ယူ၍ ငုံစုပ်လိုက်သည်။
ညိုညို၏ မျက်တောင်ကော့ကြီးများစင်းကာ ငြိမ်ကျသွားပြီး ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ကို ထောက်ကာ ဖင်ကြီးကိုဆတ်ကနဲ ကော့ပြစ်လိုက်သည်။
ဦးအေးမောင်က အဆက်မပြတ်ဆောင့်နေသော်လည်း ညိုညိုကဖင်ကြီးကိုပြန်မချ။ ကော့တင်မြဲ ကော့တင် ထားတော့ ဦးအေးမောင်က မြိန်ရေယှက်ရေဖြစ်နေသည်။
“ ပြွတ်…..စွပ်….. ပြွတ်…..ဖွတ်…. ပြွတ်….. ”
“ ဘုန်း……….. ”
“ ဟင်း….အသံတွေက အရမ်းထွက်တာဘဲ……အဟင့်.. ”
ဖင်ကြီးကိုအိပ်ယာပေါ်ပြစ်ချရင်း ညိုညိုပြောသည်။ ကျွတ်ထွက်သွားသော နှုတ်ခမ်းကို ဦးအေးမောင်က လိုက်ဖမ်း၍ ဒုတိယအကြိမ်စုပ်လိုက်ပြန်သည်။
ထိုအခါ ညိုညို၏ခါးလေး ကော့တက်အလာ ဦးအေးမောင်က ကော့တက်လာသော ခါးလေးကို ဆွဲဆွဲပြီးမနားတမ်းဆောင့်လိုးနေသည်။
ညိုညို အာခေါင်တွေပူခြောက်လာပြီး သူမ၏ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးများကဦးအေးမောင်၏ဆောင့်အားကြောင့် နိမ့်ဆင်းသွားလိုက် ပြန်ကော့တက်လာလိုက်ဖြစ်နေသည်။
“ သိပ်ကောင်းတာပဲ ညိုညိုရယ်…… ညိုညိုက အပေးသိပ်ကောင်းတာဘဲ……. ”
“ ဘာ…..ဘာ….ကောင်းတာလဲ ”
“ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်… ပြွတ်…. ပြွတ်… ”
“ လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးတာတို့ ဖင်ကြီးကော့ကော့ပေးတာတို့…… ”
“ အာ…ဦးကလဲ….အင်…ဟင့်…..ဟင့်… ”
“ ဦးပြီးတော့မယ်….တအားဆောင့်မယ်နော်…. ”
“ အင်း…..အင်း…..ဆောင့်….ဆောင့်…..ဆောင့်သာဆောင့်…..အင်း……အင်း…. ”
နာလှချည်ရဲ့ဆို၍ ရုန်းကန်ငြင်းဆန်နေသော ညိုညိုက ဦးအေးမောင်၏ ခါးက်ိုဆွဲဖက်ကာ အောက်မှကော့ပင့် ၍ ပြန်ဆောင့်နေလေပြီ။
“ ပြွတ်… ပြွတ်… စွပ်… စွပ်…. ပြွတ်… ပြွတ်… အ… အီး…. ဆောင့်…. ဦး… ညိုညို ကောင်းလာပြီ ”
တွေ့မြင်ကြားသိ နေရသော မောင်ကျော်တစ်ယောက်ကတော့ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်း ခုန်ကာ အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။
“ ပြွတ်… ပြွတ်… စွပ်… စွပ်… ပြွတ်… ပြွတ်… အင်း… အင်း… အမလေး… ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်…… အာ့… အာ့… အင်း… ”
“ ညိုညို့ကို ဦးအမြဲလိုးမယ်နော်…. ”
“ ရတယ်…..လိုး…..လိုး….ညိုညိုလာခံမယ်…….အား…..အ….လုပ်…လုပ်….ဆောင့်စမ်းပါဆို…. ”
“ အင်း… ပြွတ်… ပြွတ်… ဒုတ်… စွပ်… စွပ်… ပလွတ်… ပြွတ်… ပြွတ်… အား… အမလေး… အား…. အား…. ညို… ညို… အီး… ”
လီးကြီးကို အတင်းဆောင့်ထည့်ရင်း ဦးအေးမောင်ခါးကြီးတွန့်ကနဲတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသလို ညိုညိုကလည်း တစ်ကိုယ်လုံး တောင့်သွားကာ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့လျှက် ထောင်ထားသော သူမ၏ ဒူးလေးနှစ်ဖက်ခါရမ်း သွားလေ တော့သည်။
မောင်ကျော်မှာ ဟင်းကနဲသက်ပြင်းချရင်း လှည့်ထွက်လာခဲ့လေတော့သည်။ “ မကဲနဲ့ မောင်ရယ်…. ” မမချိုအသံက လှုပ်ရှားလှိုင်းထနေသည်။
မွှေးသင်းပျံ့လွင့်နေသော သူမ၏ နို့နှစ်လုံးအကြား မျက်နှာအပ်၍ မောင်ကျော်က အနမ်းရှည်ကြီးကိုကြာရှည်စွာ ရှိုက်သွင်းနေသည်။
“ ချစ်လိုက်တာ မမချိုရယ်… ”
“ မောင်……မကဲနဲ့ဖယ်ကွာ…..မမချိုမနေတတ်ဘူးကွ… ”
“ ဟေ့အေးကွယ်…….ဖယ်ဆို….မောင်ကလဲ…. ”
မမချို တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရီ လှုပ်ရှားလာသည်။ မောင်ကျော်၏ ပုဆိုးအတွင်းမှ ထောင်ထနေသော လီးတန်ကြီး နှင့်လည်း သူမ၏ခန်ဓာကိုယ်မှာ မကြာခဏ ပွတ်တိုက်မိနေပြန်တော့ ချိုချိုအေး စိတ်များက ဖောက်ပြားလာသည်။
အသက်ရှုမဝသလို ခံစားနေရသည်။ ရင်ထဲတွင်လှိုက်၍ မောနေသည်။ မောင်ကျော်၏ လက်များက ချိုချိုအေး၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ရဲတင်းစွာ ဆုတ်ကိုင်ချေမွကိုင်တွယ်နေရာ ချိုချိုအေးက မကြာခဏ သူ့လက်ကို တွန်းဖယ်နေရလေသည်။
မောင်ကျော်က သူမ၏နို့ကို ဆွဲညှစ်လိုက်တိုင်း တစ်ကိုယ်လုံး စိမ့်သွားကာ သွေးတွေဆူ ကြွလာသည်။
“ အဲလိုမလုပ်နဲ့ကွာ…….မောင်ကလဲ…. ”
ချိုချိုအေးက ငိုသံပါလေးဖြင့် ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း ကတုန်ကရင်ပြောသည်။ မောင်ကျော်ကတော့ တစထက်တစ ပို၍သောင်းကျန်းလာသည်။
“ ဒီလိုဆို နောက်ကိုပေးမတွေ့တော့ဘူး… ”
ချိုချိုအေး၏ ခြိမ်းခြောက်စကားက မောင်ကျော်အပေါ်စိုးစိမျှ အရာမရောက်။ မောင်ကျော်၏လက်များက သူမကိုဖက်ထားရာမှ ပို၍တင်းကြပ်လာပြီး အိပ်ယာလေးပေါ်ှဆွဲလှဲချနေသည်။
ချိုချိုအေးက လဲကျမသွားစေရန် လက်တစ်ဖက်ကနောက်ပြန်ထောက်ရင်း ကြောက်စိတ်တွေက ဝင်နေသည်။
“ မ….မလုပ်ပါနဲ့ မောင်ရယ်……မမချို…..ရှက်တယ်… အဟင့်….ဟင့်….. ”
မောင်ကျော်က စကားမပြောတတ်သလိုဖြင့် အသက်ရှုသံတွေ တရှုးရှုးတရှဲရှဲဖြင့် ချိုချိုအေး၏ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အပြားကို နမ်းရှုံ့နေသည်။
သူ၏လက်တစ်ဖက်ကလဲ ချိုချိုအေး၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ ထိုးသွင်းကာပွတ်သပ်နှိုးဆွ၍ နေသည်။
“ တော်ပြီ……မောင်…….မင်းလွန်လာပြီ…. ”
ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြင့် မောင်ကျော်၏ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်တွန်းသည်။
“ မမချို မောင့်ကို ချစ်တယ်ဆို….. ”
“ ချစ်တာနဲ့ ဒါလုပ်တာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ…..ဖယ် ”
ချိုချိုအေး ကြုံးထမလိုအလုပ် မောင်ကျော်၏လက်က ထဘီအောက်မှ လျှိူသွင်းလိုက်ပြီး ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးရှိရာသို့ မှန်းပြီးနှိုက်လိုက်သည်။
“ အာ……ဟာ…..အို……ဒုက်ခပါဘဲ….. ”
နူးညံ့နွေးထွေးသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို မိမိရရဆုပ်ကိုင်မိကာ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။
ချိုချိုအေး၏ ကိုယ်လုံးလေး တွန့်လိမ်သွားပြီးမောင်ကျော်၏ရင်ခွင်ထဲ ပြိုဆင်း လဲကျသွားသည်။
“ ကြည့်…. မောင်ကလဲ… ပြောတာမရဘူးကွာ….”
မောင်ကျော်က သူ၏ပုဆိုးကို အရင်ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
“ ဟာကွာ….. မောင်ကလဲ…. ”
ချိုချိုအေး မောင်ကျော်၏ လီးထောင်ထောင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မျက်လုံးတွေ ပြာသွားသည်။
နွမ်းလျှမောဟိုက် စွာဖြင့် မောင်ကျော်၏ ပုခုံးလေးကို မှီရင်း မျက်လုံးအစုံကို တင်းတင်းမှိတ် ချလိုက်သည်။ မောင်ကျော်က ချိုချိုအေး၏ လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲ၍ သူ့လီးကြီးနှင့် ထိတွေ့ပေးနေသည်။
သူမလက်ကလေးနှင့် လီးပူပူနွေးနွေးကြီး ထိတွေ့မိသောအခါ တစ်ကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို ဆတ်ဆတ်ခါသွားသည်။
“ ဟင့်အင်းကွယ်…….မကိုင်ချင်ဘူး…. ”
“ ကိုင်ပါ….မမချိုရယ်…..ကိုယ့်ချစ်သူဘဲဟာ….. ”
“ အိုး……… ”
ချိုချိုအေးမျက်လုံးဇွတ်မှိတ်ကာ လက်ကိုဆောင့်ရုန်းနေသည်။ မောင်ကျော်က သူမ၏ထဘီစကို ဆွဲလှန် သည်။
ချိုချိုအေးက ပြန်၍ဆွဲချသည်။ မောင်ကျော်၏ ကာမသွေးတို့က တဖြေးဖြေးပို၍ဆူပွက်လာသလို ချိုချိုအေးမှာ လည်း တဖြေးဖြေးမောပမ်းနှုံးခွေ၍လာသည်။
“ ကိုင်စမ်းပါဆို….. မမချိုကလဲ…. ”
မောင်ကျော်၏မျက်နှာကြီး နီမြန်း၍နေသည်။ မောင်ကျော်၏နှုတ်ခမ်းများ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်တို့ကို ချိုချိုအေး တွေ့မြင်နေရသည်။
သူမရှေ့တွင် မောင်ကျော်က ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ချိုချိုအေး၏ လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူ၍ မတ်ထောင်နေသော သူ့လီးကြီးပေါ်တင်၍ ကိုင်ခိုင်းလေတော့သည်။
“ ဟာ…..ဟေ့အေးဆို……မောင်ကလဲ… ”
ချိုချိုအေးက ထပ်ငြင်းနေလေ မောင်ကျော်၏ စိတ်တွေက ပို၍ပြင်းထန်လာသည်။ အကြိမ်ကြီမ်ကိုင်ခိုင်း၍ မရသည့်အခါတွင် သူမ၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဖိကိုင်ပြီး အိပ်ယာပေါ်သို့တွန်းလှဲလိုက်သည်။
“ အို……အ….အင့် ”
ချိုချိုအေးရုန်းကန်၍ထရန် အင်အားတွေစုစည်းလိုက်သည်။ သို့သော် မောင်ကျော်၏ ရင်အုပ်ကြီးအောက်၌ ချိုချိုအေး၏ နို့လေးနှစ်လုံးမှာ ပိပြားသွားသည်။
မောင်ကျော်၏ လက်တစ်ဖက်က ချိုချိုအေး၏ ထဘီလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲလှန်လိုက်လေသည်။ ချိုချိုအေး အသက်ရှုမှားသွားရသည်။
ရင်ထဲတွင်အေးကနဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို မောင်ကျော်က ပိုင်ပိုင်ကြီးစီးခွထားသဖြင့် ရှက်စိတ်တွေဖြင့် သူမခေါင်းထဲမူး မိုက်ပြာဝေသွားသည်။
အဝတ်မဲ့အသားစိုင်တို့ ထိတွေ့မှုက နှစ်ယောက်စလုံး၏ သွေးသားများကို ပြင်းထန်စွာ ခြောက်ခြားသွားစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့သွားကြပြီ။ လှိုက်မောစွာဖြင့် ချိနဲ့သော သူတို့၏လက်များက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချိနဲ့စွာ ဖက်တွယ်ထားလိုက်မိသည်။
မောင်ကျော်၏လီးကြီးက မောင်ကျော်၏ ဆီးခုံနှင့် ချိုချိုအေး၏ ဆီးခုံများကြားဝယ် ညပ်နေသည်မှ ချိုချိုအေး၏ စောက်ဖူတ်ဝသို့ တရွေ့ရွေ့တဖြေးဖြေး ရွေ့လျား၍လာသည်။
ချိုချိုအေး အသက်ကို အောင့်ထားမိသည်။ သူမ၏ ဆီးခုံကို ပြစ်ချွဲသောအရည်များနှင့် ပွတ်တိုက်ဆင်းသွားသော လီးထိပ်ကြီးက စောက်ဖုတ်နှင့် ပေါင်ကြားသို့ တေ့ထောက်မိရာ ချိုချိုအေးရင်ထဲ ပူခနဲလှိုက်ဖိုသွားရသည်။
အထဲသို့မဝင်သေးဘူးဆိုသော အသိဝင်လာပြန်သောအခါ သူမ၏ဖင်လေးက မသိမသာလေးရွေ့၍ တည့်ပေးမိပြန်သည်။
သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားမပြောမိကြချေ။ လက်နှင့်မကိုင်ဘဲ လီးနှင့်စောက်ပတ် တည့်ဝင်သွားရေးကို ဖင်ကြီးနှစ်ခုက လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေကြသည်။
“ ပြစ်……..ပြစ်….. ပြွတ် ”
“ ဟာ….. ဒုက္ခပါဘဲ မောင်…. ဝင်… ဝင်သွားပြီ… ”
ဝင်စေရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဝင်သွားပြန်တော့ ပြောလိုက်သော စကားသံက တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေပြန်သည်။
“ ဝင်သွားပြီလား မမချို ”
“ အင်း…… အင်း…… ဝင်သွားပြီ မောင်ရယ်….. ”
“ မောင်လိုးတော့မယ်နော်….. ”
မလိုအပ်ပဲ မောင်ကျော်က ပြောလိုက်သည်။
“ အိုး…..ဘာတွေပြောမှန်းလဲမ….မသိဘူးကွယ်…. ”
“ မောင်နဲ့ မမချို အားရပါးရလိုးကြရအောင်လို့ ပြောနေတာ…. ”
“ ကျွတ်…..ပါးစပ်အရမ်းကြမ်းတာဘဲ……ရှက်တယ်ကွာ….. ”
“ မရှက်ပါနဲ့ မမချိုရယ်…. မောင့်လီးကြီးက မမချိုရဲ့ စောက်ပတ်ထဲဝင်နေပြီဘဲ ဘာရှက်စရာရှိသေးလို့လဲ ”
မောင်ကျော်၏ တစ်တစ်ခွခွ ပြောစကားတွေကို ကြားနေရသော ချိုချိုအေးမှာ သွေးသားတွေက ပို၍ ထကြွ လာရသည်။
ထိုစကားများကြောင့် ရှက်နေသောအရှက်က နဲနဲကုန်၍သွားရသည်။
“ မောင်ကလဲကွာ……ပြောလေကဲလေဘဲ…….အင်း…..အင့်….အင်း…. ”
ပြည့်ဖောင်း မာတောင့်နေသော မောင်ကျော်၏လီးကြီးက ချိုချိုအေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တဖြေးဖြေးတိုးဝင် နေဆဲပင်ရှိသေးသည်။
“ ပြစ်….ပြစ်….ပြစ်….ပြွတ်… ”
“ အား…..အား……မောင်….မောင်ရယ်….အ…..အ…..အင့်…. ”
စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးကဝင်နေရာတွင် လီးထိပ်ကြီးက ချိုချိုအေး၏ တစ်ခါမှလီးမဝင်ဖူးသေးသော စောက်ခေါင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ထောက်၍ထောက်၍ တင်းကနဲတန်းနေသည်။ လီးကရှေ့ဆက်မဝင်ဘဲ အနဲငယ်ကွေးညွှတ်သွားသည်။
“ အီး…….မောင်….နာ…..တယ်…..အရမ်းနာတယ်…..မောင်ရယ်…… ”
“ စောက်ပတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲပေးထားပေးပါလား မမချို…… ”
“ ဟာ…..ဒုက္ခပါဘဲ…..ရှီး……အ….ကျွတ်….ကျွတ်….ကဲ….ကဲ…. ”
ချိုချိုအေး၏ လက်နှစ်ဖက်က ပေါင်ခြံနှစ်ဖက်ပေါ် ရောက်လာပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ညာ ဆွဲကိုင်ပြီးဖြဲပေးသည်။
“ ဗြစ်….အ….အား…..ဟာ ”
လီးက စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဗြစ်ကနဲကျွံဝင်သွားသည်။
မောင်ကျော်၏ ကျောပြင်ကြီးကို ချိုချိုအေးက တအားကြီးဖျစ်ညှစ်ဖက်တွယ်ကာ ဖင်ကြီးကို မွှေ့ရမ်းကော့တင်ပေးမိသည်။
“ ပြွတ်… ပြွတ်…စွပ်…စွပ်…. ပြွတ် ”
“ ကောင်းလိုက်တာ မမချိုရယ်…. ”
“ ပြွတ်… ပြွတ်…စွပ်…စွပ်….. ပြွတ် ”
“ မောင်…မောင်ရယ်…မမကို ပြစ်မသွားပါနဲ့နော်…မင်းသာ ပြစ်သွားရင် မမတော့သေမှာဘဲ…အ…အင်း”
အင်အားကြီးမားသော အချစ်တွေကဟူန်းကနဲ ကြွတက်လာသည်။ ရင်ထဲတွင် ဖုံးဖိထားသမျှ ဒီအချိန်တွင် ပေါ်ထွက်တတ်သည် မဟုတ်ပါလား။
“ ခံလို့ကောင်းလားဟင် မမချို ”
“ အာ….မမေးနဲ့ကွာ….မမရှက်တယ်….အင့်ဟင့်… ”
“ ပြွတ်…ပြွတ်….စွပ်….ပြွတ်….ပြွတ်…စွပ်.. ”
“ မမချို စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးရတာ သိပ်ပြီးအရသာရှိတာဘဲ….တစ်ချီနဲ့တော့ အားရမယ်မထင်ဘူး…. ”
“ လိုး….လိုး….အားရအောင်လိုးတော့…မမ တစ်ကိုယ်လုံးကို မောင့်ဆီမှာ အပ်ထားပြီးပြီ…. ”
မောင်ကျော်၏ဖင်ကြီးက ကြွတက်သွားလိုက် နိမ့်ကျသွားလိုက်ဖြင့် ဆောင့်ချက်တိုင်းလှုပ်ရှား ၍နေသည်။
“ ပြွတ်….ပြွတ်…..စွပ်….စွပ်….ပြွတ် ”
“ အားရပါးရကြီး ဆောင့်စမ်းပါ မောင်ရယ်….မမကိုမညှာနဲ့… ”
“ ပြွတ်….ပြွတ်…..စွပ်….စွပ်….ပြွတ်…အ..အင့်…အင့် ”
“ မောင်….မောင်…မမဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူး….အ…အင်း….အား….အား… ”
“ ပြွတ်….ပြွတ်…..စွပ်….စွပ်….ပြွတ်….စွပ်….ပြွတ် ”
“ အ…အ..အား..ဟင်း…ဟင်း… ”
နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူနီးပါးပြီးသွားကြလေတော့သည်။ မောင်ကျော်တစ်ယောက် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်ဆိုက်ထဲမှ စက်ဘီးဖြင့်ထွက်၍အလာ လှသန်းတို့အိမ်ရှေ့အရောက် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့ရေတိုင်ကီတွင် ညိုညိုရေချိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
မောင်ကျော်စက် ဘီးပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်။ မောင်ကျော်မှာအရင်ထဲက ညိုညိုကိုတွေ့ရင် သဘောကျစွာဖြင့် ငမ်းနေတတ်သည်။
ပြီးတော့ သူသဘောကျနေသော ညိုညိုကို ဦးအေးမောင်က ပက်ပက်စက်စက် လိုးနေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မောင်ကျော်သွေးသားတွေ ညိုညိုနှင့်ပတ်သက်၍ ပေါက်ကွဲခဲ့ရသည်။
အခုတော့ လှသန်းဆိုက်ထဲတွင်ရှိ၍ အိမ်တွင် ညိုညိုတစ်ယောက် ထဲသာရှိကြောင်း မောင်ကျော်အတတ်သိသည်။ မောင်ကျော်စက်ဘီးကို ဒေါက်ထောက်လိုက်သည်။ မဆိုသလောက် အသံမြည်သွားသော အသံကြောင့် ညိူညိူလှည့်ကြည့်သည်။
“ ဟာ….. အကိုကျော်…. ဘယ်လဲ ”
“ ဒီကိုဘဲလာတာ ”
“ အိမ်ထဲဝင်ထိုင်လေ…… ကျမလဲ ပြီးပါပြီ ”
ညိုညိုက ရေလဲလုံချည်ကို ရင်လျားရင်းပြောသည်။ မောင်ကျော်က အိမ်ထဲဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်။ ညိုညို၏ တင်းရင်းလှပ အချိုးကျလှသော ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ရင်လျားထားသော ရေလဲထဘီလေးက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ရေများဖြင့် တစ်သားထဲကပ်နေသည်။
မောင်ကျော်ကြည့်နေရင်း အာခေါင်တွေခြောက်လာပြီး အသက်ရှုပြင်းလာ သည်။ ညိုညို နောက်ဖေးဖက်သို့ ဝင်သွားပြီး ရေနွေးခရားနှင့် ပန်းကန်လုံးများ တင်ထားသော လင်ပန်းကို ယူလာပြီး မောင်ကျော်နား လာချသည်။
“ အကိုကျော်…… ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ ”
“ ထိုင်ပါဦးဟ…… ဖြည်းဖြည်းပြောတာပေါ့ ”
ညိုညိုက သိချင်ဇောဖြင့် မောင်ကျော်၏အနီးတွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။
မောင်ကျော်ဘာမှမပြောဘဲ ရေနွေးတစ် ပန်းကန်ငှဲ့၍သောက်နေပြီး သူ၏မျက်လုံးများက ညိုညို့တစ်ကိုယ်လုံးကို စားတော့ဝါးတော့မတတ်ကြည့်၍နေသည်။ ညိုညိုက ခေါင်းလေးငုံ့နေရှာသည်။
ခဏကြာသည်အထိ မောင်ကျော်ထံမှ ဘာစကားသံမှထွက်မလာတော့ ညိုညို ငုံ့ထားသောမျက်နှာလေးကိုမော့၍ မောင်ကျော့်ထံ ကြည့်လိုက်သည်။
ထိုအခိုက်မှာပင် မောင်ကျော်က သူမ၏ရှေ့သို့ ဗြုံးကနဲတိုးကပ်လိုက်ပြီး ညိုညိုကို အတင်းဖက်ကာ နမ်းတော့သည်။
“ အို…….အို……မလုပ်နဲ့ အစ်ကိုကျော်……..အ….အ….မလုပ်နဲ့ ”
နမ်းရုံသာမဟုတ်။ ရင်လျားထားသော ထဘီကိုပါ ဖြတ်ကနဲဖြုတ်ချပြီး မောင်ကျော်၏လက်က ညိုညို၏ နုနယ်လှသော နို့နှစ်လုံးကို အတင်းဆုပ်နယ်နေသည်။ မောင်ကျော်၏ လက်တစ်ဖက်က ညိုညို၏နောက်ကျောကို သိုင်းဖက်ထားတော့ ညိုညိုမှာဘယ်လိုမှ ရုန်း၍မရဘဲဖြစ်နေသည်။
“ တော်ပါတော့ အကိုကျော်….. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ”
ညိုညို၏အသံက ထိမ်းပြောပေမဲ့ တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေကြောင်း သိသာလှသည်။
မောင်ကျော်၏ မျက်နှာက သူမ၏ မျက်နှာမှသည် အောက်ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းသွားပြီ။ လက်တစ်ဖက် ညိုညို၏ ကိုယ်ကိုမလွှတ်ဘဲ နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပြစ်သည်။
“ အ…..အို….ပြွတ်…ပလပ်…..ပြွတ်……ပလပ်…..ပြွတ်……ပြွတ်……အိုး…..အိုး ”
နို့နှစ်လုံး၏ နို့သီးခေါင်းတွေကိုပါ လျှာဖြင့်ထိုးမွှေ ပွတ်သပ်နေလေတော့ တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လုံးတွေ စင်းစင်းကျသွားပြီး မောင်ကျော်၏ မျက်နှာကြီးကလဲ သူမ၏ ရင်ဘတ်ကို ဖိဖိနေလေတော့ ညိုညို၏လက်တစ်ဖက်က နောက်သို့ကျားကန်၍ ထောက်ထားရသည်။
ညိုညို မဖွင့်ချင်တော့သော သူမ၏မျက်လုံးကို အားယူ၍ ဖြတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ တော်သေးသည်။ သူတို့ရှိနေသည်မှာ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်တဲ့တဲ့မဟုတ်၍ လမ်းမမှ မမြင်နိုင်ချေ။ တဖြေးဖြေး ညိုညိုအသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာသည်။
ထိုအချိန်တွင်မှ မောင်ကျော်က သူမ၏နို့တွေကို လွှတ်ပေး လိုက်ရုံမက သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ညိုညို မျက်လုံးကိုအားယူ၍ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
“ ဘယ်….. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အကိုကျော်ရယ်…… ”
အသံက နွမ်းလျမောဟိုက်၍ နေသည်။
“ ဟိုနေ့က နင်နဲ့ဦးအေးမောင်ကို တွေ့ပြီးထဲက နင့်ကိုငါလုပ်ချင်နေတာ… ”
“ အို… ”
ညိုညိုမှာ မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားပြီး ခေါင်းငုံသွားသည်။
ပြီးမှ ညိုညို၏ မျက်နှာလေးက ပြန်၍မော့လာပြီး…………
“ ဒါများ အကိုကျော်ကလဲ….. အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ……. ”
ပြောလဲပြော ဗြုန်းကနဲထ၍ ထဘီကို စွန်တောင်စွဲကာ အိမ်အတွင်းထဲ ပြေးဝင်သွားတော့ မောင်ကျော်က လဲ ဝုန်းကနဲထကာနောက်မှ ပြေးလိုက်သွားသည်။
အတွင်းခန်းထဲအရောက် ညိုညိုကို မှီသွားပြီး နောက်ကနေ လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ ညိုညိုအားလွန်သွားပြီး လက်ထဲမှ ထဘီကိုလွှတ်ချကာ သူမရှေ့မှ အိမ်နံရံကို လက်ထောက် ၍ အားပြုလိုက်ရသည်။
ညိုညိုမှာ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ကုန်းပေးလိုက်သည့်ပုံစံဖြစ်သွားသည်။ သူမခါးကို နောက်မှဖက် လျှက်သားဖြစ်နေသော မောင်ကျော်က သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး အဆင့်သင့်တောင်မတ် နေသော သူ့လီးကြီးကို သူမ၏နောက်သို့စူထွက်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားသို့ တေ့ကာဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။
“ ပြွတ်…..ပလွတ်…..အား…..အမလေး….သေပါပြီ ”
ညိုညို၏ ခါးလေး ကုန်ထ၍လာသည်။ မောင်ကျော်ကလီးတဆုံး ဝင်သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ညိုညို၏ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်၍ တလစပ်လိုးဆောင့်သည်။
“ ပြွတ်….ပြွတ်….အား…..အ…နာတယ်….နာတယ်….ပြွတ်……ပြွတ်……စွပ်…..စွပ်….အား…..အား ”
ဆက်တိုက်ဆောင့်နေရင်း မောင်ကျော်က သူမ၏ခါးပေါ်မှ သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်ယူကာ ညိုညို၏ နို့များဆီသို့ လှမ်းလိုက်ပြီး တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ဆုပ်နယ်ပေးကာ ဆောင့်သည်။
“ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်….အ….အင့်…..အ……အင့်… ”
ခဏအတွင်း ညိုညိုနာသည်ဟု မအော်တော့ပေ။ စောက်ခေါင်းထဲတွင်လည်း စိုရွှဲစေးထန်း၍ လာသည်။
“ ပြွတ်…. ပြွတ်…..စွပ်…..စွပ်…အ….အင်း….အင်း……ညိုညို နာသေးလား….လုပ်….လုပ်….လုပ်မှာလုပ် အစ်ကိုကျော်….. ”
ဟူ၍ သူမ၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်က နောက်ပြန်လှမ်းကာ မောင်ကျော်၏ တင်ပါးလေးကိုလှမ်း၍ ပုတ်ရင်း ပြောလိုက်လေတော့သည်။
“” အချစ်သစ် “”
မောတယ်ကိုကိုရယ် ( အသစ်စက်စက်)